Ingabe It Right To Fall In Love With A Man Married?
Kukhona abesifazane abaningi abenza ukuthandana namadoda ashadile singahlosile, kuyilapho abanye abaningi ngamabomu bafuna amadoda ashadile azijabulise (Pun okuhloswe) lokuba indoda ngokomthetho un-kuyatholakala. Nokho, umbuzo njalo uhlala ngokuthi kulungile ukuthandana nomuntu oshadile?
Falling indoda eshadile ingase ibonakale ilungile, ikakhulukazi uma umuntu uthi Zizwa ngokufanayo kanye. Ngaphezu kwalokho, owesifazane esimweni esinjalo futhi athole umqondo wokulondeka oyiphutha wokuthi maduze umuntu ahlukane nomfazi, ukuze ubuhlobo babo kungaba bungakhula ungaphazanyiswa. Nokho, a ubuze besimo, ukuthi kudingeka kuphihlizwe ngokuphelele ngenxa yezizathu ezilandelayo.
Abesifazane kufanele bafunde ukuhlonipha ngokwabo
Indoda nomndeni abasoze bakwazi ukunikela owesifazane ukwaneliseka lokuba nobuhlobo real. Ngisho noma umuntu ethatha isikhathi sakhe ukuze banakekele wakhe ngokunakekela, thanda, kanye nezipho, iqiniso, ngeke ushintshe into!
Leyo wesifazane a kufanele nizame bazibeke izicathulo of umkayo. Baba kanjani uma omunye wesifazane wenza okufanayo kuzo? Uma ahloniphe ngempela ngokwabo, ke kufanele baqonde ukuthi into uzogcina ukwenza nihlukane umndeni, futhi akuyona ilebula yimuphi owesifazane ofuna ukuba, Ngiyethemba!
Amadoda akasoze akushiye omkawo
Ngisho noma amadoda ukucula ngokuphindaphindiwe ukuthi ngeke ahlukane omkawo ngokushesha ukuze zikwazi babe nobuhlobo real uthando lwakhe ezintsha, ukuthi akusoze kwenzeka. Uma amadoda ukuthola abesifazane abavumelana ukuba nobuhlobo nabo, ziyazi ukuthi imindeni, ke amadoda angene zone induduzo. Esimweni esinjalo, bayohlala nakanjani ufuna alondoloze isimo-quo, ngoba ngeke ufisa ukuba ishiye imikhaya yakubo yabo.
Cabanga umndeni wendoda
Women, ungabi nobugovu! Ngaphambi kokunquma nobuhlobo ukuthi indoda eshadile, khumbula umkhaya uya konakale. Isimo izoba buhlungu nakakhulu uma kukhona izingane abathintekayo. Izingane nakanjani kube esichaphazeleke uma umuntu unquma ukuhamba nabo. Futhi ake Ungakhohlwa umfazi, abangase bahlukumezeka ngenxa yokuphila.
Uma for akukho okunye, ke umndeni kufanele ukukholisa owesifazane ukuthi akulungile ukuthandana nomuntu oshadile.
Abesifazane akufanele nanini axazulule for esingaphansi bafanelwe
Kungani emhlabeni, ingabe enhle, ezihlakaniphile futhi smart owesifazane ofuna ukuba axazulule indoda angeke azenze ubuhlobo real, ngoba nje umuntu oshadile? Ubungeke owesifazane onjalo kangcono ngifuna umuntu angashadile ngokugcwele abazinikezele ukuze sibe nobuhlobo real? Abesifazane badinga isitayela up and abakholwa ngokwabo kanye umthamo wabo ukuheha indoda eyodwa, nabo ungaba nobuhlobo naye akukho okuzosibambelela.
Kulungile uphatheke kabi breaking isidleke love
Uthando ingenye imizwelo kunzima kakhulu ukulawula. Njengoba okuningi njengoba owesifazane Kungenzeka ungumuntu othanda ngempela futhi kakhulu indoda eshadile, iqiniso liwukuthi ubuhlobo is not elibangise kuphi. Ngokwalesi sizathu, kungcono ukuba awuqede ngokushesha, kunokuba kamuva, ukuze uthole isikhathi esanele ukuphulukisa. Qiniseka ukuthi ngeke kube lula ngaso sonke, kodwa iyobe iwufanele it in the end.
Musa bathonywe imibono yabanye
Owesifazane in a nendoda eshadile abayokwahlulelwa abanye kuzo zonke emagumbini. Owesifazane, kanjalo, kudingeka abe nesibindi aphule off nomuntu ngoba kuyinto efanele ukwenza. Ngaphezu kwalokho, ukuthi sizosizuzisa wesifazane aphule it off, ukuba bakwazi ukuhlangabezana umuntu abangakwazi ngokugcwele uzibophezele kokuba nobuhlobo.
Musa uthintane umuntu nganoma yisiphi isizathu
Uma owesifazane likulahla indoda eshadile, ke kubalulekile ukuqeda zonke izinhlobo ukuxhumana umuntu. Owesifazane kumele bashintshe ngisho inombolo contact elalisetshenziswa ithintane nomuntu. Lokhu kuyoba ukuqala kwenqubo sokuphulukiswa.
Akekho ungakwazi ukulawula ubani yena ukuthandana nabantu, Nokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi akulungile ukuthandana nomuntu oshadile. On ukuthi inothi, for labo besifazane kakade uthando namadoda ashadile, isikhathi salo sokuba up break!
Usuku lokuqala kungaba isikhathi esishubile bobabili. Akekho owaziyo ukuthi yini ongakulindela, ngisho uma ...